စိမ့်စမ်းရေ: Wisdom Teeth အံဆုံးပေါက်လို့နာတာ သက်သာနည်းများ
• Aspirin, Ibuprofen နဲ့ Benzocaine အနာသက်သာဆေး တမျိုးမျိုး သောက်ပါ။
• Massage နှိပ်နယ်ပေးနိုင်တယ်။
• သွားနာနေချိန်မှာ ငြိမ်ထိုင်မနေဘဲ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု လုပ်ပေးသင့်တယ်။
• သီချင်း-ဂီတ နားထောင်သင့်တယ်။ ရုပ်ရှင်-တီဗွီကြည့်ပါ။
Partial eruption အံဆုံးက အကုန်မထွက်နိုင်ရင် အပေါ်မှာ အဖုံးလိုဖြစ်မေတာကို Operculum ခေါ်တယ်။ သူ့အောက်မှာ ဗက်တီးရီးယားတွေ အောင်းနေနိုင်တယ်။ သွားတိုက်တံနဲ့ လုပ်ပေးတာလဲ မရဖြစ်နေတတ်တယ်။ အပ်မပါတဲ့ ဆေးထိုးပိုက် သုံးပြီး လုပ်နိုင်တယ်။ ပြီးရင် Hydrogen peroxide (H²O²) ဆေးရည်နဲ့ ဆေးပါ။ နီရဲပြီးရောင်နေမယ်။ ပါးစပ်ဟလို့ ခက်မယ်။ ခံတွင်းနံ့ ဆိုးလာမယ်။ Extraction သွားနုတ်ပြစ်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် Operculectomy ခွဲစိတ်ရမယ်။ ခွဲစိတ်ကာကြောင့် အာရုံကြောကိုထိခိုက်မိရင် လျှာထုံတာ ယာယီဖြစ်နေမယ်။ ကံမကောင်းရင် တသက်လုံး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ နာတာရှည်ရောင်တာဖြစ်နေတာကို Chronic pericoronitis ခေါ်တယ်။ Paradental cyst အိတ်လိုလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) = တခါသောက် 250mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။
2. Metronidazole (မက်ထရိုနိုက်ဒါဇောလ်) (ဆေးရဲ့ တခြားအသုံးပြုနည်းတွေကိုပါ ထည့်ရေးပါရစေ။)
• Amebic Infections (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်ရောဂါ = တခါသောက် 750 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၅-၁ဝ ရက်။
• Bacterial Vaginosis (ဗဂျိုင်းနား) ရောင်ခြင်း = Metronidazole vaginal gel မွေးလမ်းကြောင်းထဲထည့်ဆေး၊ တနေ့ ၂ ခါ၊ ၅ ရက်ထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Extended-release Metronidazole တာရှည်ခံဆေးပြား 750 mg တနေ့ (၁) ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်။ တာရှည်ခံမဟုတ်တဲ ဆေးမျိုး မတိုးပါ။
• Trichomoniasis လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ = Metronidazole2grams တခါတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 375 mg တနေ့ ၂ ခါ၊ ၇ ရက် သောက်ပါ။
3. Amoxicillin (အမောက်ဆလင်)
• Cystitis ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း နှင့် Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၃-၇ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
• Otitis Media နားအလယ်ပိုင်းရောင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊ ၁ဝ-၁၄ ရက်။
• Sinusitis ဆိုင်းနပ်စ် = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊ ၁ဝ-၁၄ ရက်။ တချို့ကို ၃-၄ ပါတ်ကြာအောင်ပေးရသည်။
• Skin or Soft Tissue Infection = အရေပြားနာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇-၁ဝ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
• Upper Respiratory Tract Infection အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇-၁ဝ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
• Bronchitis လေပြွန်ရောင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇-၁ဝ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
• Tonsillitis/Pharyngitis အာသီး-အာခေါင်ရောင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇-၁ဝ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
• Bacterial Infection ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း = တခါသောက် 250 to 500 mg တနေ့ ၃ ခါ၊ ၇-၂၁ ရက်။ ဒါမှမဟုတ် တခါသောက် 500 to 875 mg တနေ့ ၂ ခါ၊
4. Ciprofloxacin (Cipro) (စစ်ပရိုဖလောက်ဆာစင်)
Bone အရိုး၊ Joint အဆစ်၊ Lower Respiratory Tract အသက်ရှူလမ်းအထက်ပိုင်း၊ Prostate ဆီးကျတ်၊ Sinus (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ Skin အရေပြား Infections ပိုးဝင်တာတွေအတွက်သုံးတယ်။
• Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း (သာမန်) = တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။
• Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း (အသင့်အတင့်ဆိုး) = တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇-၁၄ ရက်။
• Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း (ဆိုး) = တခါသောက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇-၁၄ ရက်။